Otu esi enweta ahịa $ 1000/m na ahịa mmekọ: 6 Nzọụkwụ Dị Mfe - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Otu esi enweta ahịa $ 1000/m na ahịa mmekọ: 6 Nzọụkwụ Dị Mfe
Ụdị ọkwa:Mgbakwunye Ahịa / Nweta ego n'ịntanetị
Mgbakwunye ahịa bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na -eme nke ọma na ụwa ịntanetị. Ndị mmadụ na -achọ ọtụtụ ihe, ntuziaka na -enye aka na ịntanetị kwa nkeji ọ bụla. Ọchịchọ a abụghị n'ime puku mana na nde.
Na nloghachi, ha na -aga na webụsaịtị ka ha nwee ike dozie nsogbu a. Oge ahụ, mgbe ị na -ede akwụkwọ enyemaka na weebụsaịtị, onye edemede na -atụ aro ụfọdụ ụzọ kacha mma maka nsogbu a site na njikọ njikọ.
N'ihi ya, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ zụọ ihe, onye edemede na -anata ọrụ. Ndị ọrụ n'ozuzu nwere ike ịbụ ihe ọ bụla n'etiti 1% ka 60% dabere n'ụdị ngwaahịa ị na -akwalite.
Enwere ọtụtụ weebụsaịtị na -anabata nde ndị ọbịa kwa ọnwa. Na ọnụego ntụgharị na -anọkarị 5%. Ugbu a, ị nwere ike ịtụle ngwa ngwa ma ọ bụrụ na otu n'ime weebụsaịtị na -enweta 1 nde ndị ọbịa webụsaịtị kwa ọnwa, ego ole ha na -enweta na ahịa mmekọ.
Ụfọdụ ndị ọbịa na -agụkwa ihe: Ọ Siri Ike Ime Ego Site na Mgbakwunye ahịa?
Nzọụkwụ Ntuziaka iji Mepụta webụsaịtị/blọgụ Mgbakwunye
Ịzụta ngalaba na nnabata
Ịtọ blog gị
Ntọala permalink na ide blọọgụ mbụ gị
Ịchọta mmemme mmekọ kacha baa uru
Ijikọ mmemme mmemme
Ịde blọgụ na -enye aka
N'ime akwụkwọ ntuziaka a na -enye aka, anyị ga -akụziri gị otu esi eme 1000+ dollar na usoro isii dị mfe nke ịre ahịa mmekọ.
Ịzụta ngalaba na nnabata: Ịmepụta blog gị
Ịchọta isiokwu kacha baa uru: Akwa pasent nke ọrụ
Jikọọ na Mmemme Mmemme: Amazon, ShareAsale, Njikọ Njikọ
Nnyocha isiokwu: Semrush, Onye na -achọta KW
Nkeji edemede: Na -etinye ọdịnaya Post
Na -eme SEO: Na Peeji, Gbanyụọ Peeji
Nkwalite akụkọ blọgụ: Instagram, Twitter, Facebook
Ị nwere ike ịme ahịa mmekọ ọbụna site na Youtube, na nyiwe dị iche iche mana maka ịkpata ezigbo ezigbo ego na -eto mgbe niile. M na -atụ aro ka ị nwee blọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Nke a na -eme nnukwu ihe ị naghị eche maka ya.
Na mbido njem gị, ọ dị mkpa ịnwe nzụta ngalaba aha na nnabata. Mgbe ụfọdụ, anyị na -eme ihe na -ezighị ezi yana ịzụrụ ọnụ. Mana lee, m ga -achọ ịkwado gị ụfọdụ ndị nnabata web kacha mma na mbido njem gị. Ugbu a, ha na -enye ọnụ ego dị mma nke ga -abara gị uru nke ukwuu. Ị nwere ike iji koodu dere wee zụta n'aka anyị iji rite uru na ọnụ ala.
Aha ngalaba nwere ike ịbụ ihe ọ bụla na ọ kwesịrị ịdị. Ọ kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche nke enwere ike iwere ya dị ka aha akara ma ana m atụ aro ịzụta ntụpọ (.)com karịa ndị ọzọ. Ọ na -enyere gị aka ịhazi mba ụwa.
Ozugbo ịzụrụ nnabata web na ngalaba ọ bụ oge ijikọ ha abụọ. Ọ bụrụ na ịzụrụ ya site na otu nnabata na ụlọ ọrụ ngalaba mgbe ahụ ị nwere ike jiri otu pịa mee ya ma ọ bụghị na ị ga -anọchi adreesị IP sava ahụ iji mee ka blọgụ gị dị ndụ.
N'isiokwu a, Nke a bụ nkuzi iji jikọọ webhosting na ngalaba Godaddy.
Ozugbo ịbanye na dashboard WordPress gị. Nzọụkwụ mbụ bụ ịtọlite ​​isiokwu webụsaịtị gị. Ana m akwado mgbe niile ihe kachasị dị fechaa bụ isiokwu Astra.
Ọ bụ ụfọdụ njirimara bụ n'efu ebe ndị ọzọ adịchaghị mma. Maka ụdị mmekọ na -ere ahịa nke mmekọ na -arụ ọrụ nke ọma ịkwesighi ịga maka ịzụrụ ihe adịchaghị.
Ihe ọzọ, Ana m atụ aro gị maka ịre ahịa nke ọma ọdịnaya ọdịnaya gị kacha mkpa karịa imewe webụsaịtị gị. Eeh, o kwesịrị ịdị mfe, ibu ngwa ngwa zuru oke mana enweghị mkpa maka ụdịdị, mara mma. Ihe kpatara ya n'ihi na ọdịnaya gị dị na Google kama imewe ya. Ngwa ọchụchọ dị ka Google na -eche maka ọdịnaya mgbe niile na -agbalịkarị ịnye ndị ọrụ ntuziaka na -enye aka.
Permalinks bụ akụkụ nke SEO yabụ kama ịhọrọ ụbọchị m na -akwado ntọala ndị a, nke m megoro na foto a. Nke mbụ, họrọ udi mgbe ahụ url.
Ọ dị oke mkpa ịchọ ohere nwere ezigbo kọmịshọna na ndị mmadụ na -achọ ngwaahịa. Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere mmemme mmekọ. Ha na -anabata ndị nwe webụsaịtị isonye na mmemme ha ma kwalite ngwaahịa ha. Ndị edemede webụsaịtị na -ede nyocha ngwaahịa a na -enye echiche ziri ezi nke na -eme ka ndị na -agụ webụsaịtị kwenye n'ezie.
Ebe nrụọrụ weebụ a ma ama dị ka Amazon, CJ, ịkekọrịta ọrịre, radius mmetụta bụ webụsaịtị a ma ama nke na -arụ ọrụ dị ka otu ụlọ maka mmemme mmekọ niile.
Mgbe ịbanye na weebụsaịtị ha, ị ga -ahụ ọtụtụ puku mmemme mmekọ dị iche iche iji sonyere yana ọnụego ikike ha na arụmọrụ akụkọ ihe mere eme ha, ụzọ isi kwalite ngwaahịa ha, wdg.
Agwara m gị na ọkwa mbụ nke akụkọ ị nwere ike nweta ezigbo ọrụ enyere 60% dabere n'ụdị ngwaahịa ị na -akwalite.
Tupu isonye na mmemme ọ bụla, ana m akwado ka ị lekọta ọnụego ọrụ gị. Ọmụmaatụ, ngwa elektrọniks nwere ọnụego ọrụ kacha ala. N'okwu a, ọ bụrụ na ịkwalite ngwaahịa elektrọnik ọ bụla dịka TV, ngwa kọmputa, ị ga -enweta obere ego ọrụ. Ebe, ngwaahịa ụlọ na kichin nwere ọrụ kacha. Ka e were ya na m na -akwalite oven microwave nke ga -efu ihe karịrị ya $100. Ọ bụrụ na ọrụ amazon ya ugbu a bụ 7% mgbe ahụ ị nwere ike iche n'echiche ego ole ị ga -enweta mgbe ịrechara ya.
Ị nwere ike gụọ nyocha anyị na Mgbakwunye ahịa Amazon
Na mgbakwunye na nke a, ị kwesịrị ịma ihe bụ ụzọ nkwalite -na -enye gị Kupọns, ọkọlọtọ dị iche iche, onyinye ego, wdg.
Maka ahịa mmekọ, ị kwesịrị ide ụdị ọdịnaya onye ọrụ na -achọ.
Ideela edemede ahụ nke narị narị webụsaịtị derela. Mmalite ọhụrụ nke a abaghị gị uru ọbụlagodi na ị nwere ikike inwe ọdịnaya na -enye aka. Ị gaghị anọ n'ọkwá mbụ.
Maka nke a, ị ga -aga maka nchọpụta isiokwu kwesịrị ekwesị. Ụdị nyocha na akụkọ na -enye aka na -enweghị onye dere ya na mbụ. M na -eji ngwá ọrụ eme ihe maka ịme ahịa mmekọ. Ngwá ọrụ isiokwu ọkacha mmasị m bụ Semrush. Ọ na -enye m ohere ịchọpụta isi okwu asọmpi asọmpi kacha baa uru. Ederede isi okwu asọmpi dị ala na -enweghị onye ọ bụla ma ọ bụ naanị webụsaịtị ole na ole dere akụkọ na ya.
Cheta, nke a bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa. Echefula nzọụkwụ a ma ọ bụghị na ọrụ ike gị niile abaghị uru. N'eziokwu, Ọbụna m na -emefu 2 ka 3 izu na -eme ndepụta zuru oke nke 20 + mkpirisi mkpirisi ogologo ọdụ ọdụ.
Ị nwere ike dee ụdị ozi ọdịnaya atọ, azụmahịa, na ịnyagharịa.
N'ime ụdị ọdịnaya atọ a niile, ị ga -ahụ nke kacha asọmpi n'ụdị ọdịnaya azụmaahịa ebe ọ kacha dị obere na ozi.
Ana m akwado gị ka ị dee ọdịnaya ozi kama itinye uche na azụmahịa n'ihi na ị na -amalite ụbọchị. Ọ na -esiri ike ịkwa ọkwa site na mabanye ozugbo na asọmpi.
Ime ka o dokwuo anya, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịgụ akụkọ- “esi ehicha microwave oven n'ụlọ”. Ụdị akụkọ a bụ akụkọ ozi. N'oge ntuziaka gị zuru oke, ị nwere ike ịkwado otu ngwaahịa ma ọ bụ abụọ ị ga -eji onwe gị wee tụọ aro ka ha zụta. Na nloghachi, ị ga -enweta ọrụ.
Ị kwesịrị inwe mkpado isiokwu kwesịrị ekwesị, Ntuziaka nzọụkwụ site na foto. Ka ndị ọrụ na -etinyekwu oge na webụsaịtị gị, akara ngosi dị mma iji nweta ọkwa dị elu.
SEO na -edepụta ọdịnaya na -enye aka nke Google na injin ọchụchọ ndị ọzọ nwere ike ịghọta. Ị nwere ike nweta enyemaka nke Yoast, Plugins RankMath WordPress iji bulie edemede gị nke na -enyere gị aka ịkwado ọkwa ngwa ngwa.
Na mgbakwunye na nke a, SEO na-apụ apụ na-arụkwa ọrụ. Backlinks bụkwa akụkụ ya. Ma ụbọchị ndị a, ị nwere ike wepụta weebụsaịtị gị dabere na naanị ọdịnaya kama ilekwasị anya na ibe SEO.
Kedu otu ị ga -esi chefuo social media. Ha na -anabata nde ndị ọbịa kwa ụbọchị. Ị nwere ike iji Facebook, Instagram, youtube Twitter ịkekọrịta post gị.
Na mbụ, ọ nwere ike isiri gị ike ịpị mbido mana mana ọ bụrụ na ị na -anọgidesi ike n'idebe akụkọ gị na webụsaịtị gị yana na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga -emelite. A gaghị enwe oge ịnabata ndị ọbịa webụsaịtị wee malite irite uru na mmekọ mmekọ.
Na ndị a 7 usoro dị mfe iji malite njem gị. ị nwere ike nweta ọkwa dị elu n'elu ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ nke ọma wee nwee ndidi na ọdịnaya nwere oke nke onye ọrụ na -alaghachi na webụsaịtị gị ugboro ugboro.
Naanị ihe fọdụrụ bụ –ị na -eche ịmalite. Ọ bụ ụdị ego na -abaghị uru nke na -eto ka oge na -aga anaghị adalata. Ị nweghị ike ileda azụmaahịa mmekọ mmekọ na isi mmalite ọzọ bụ inweta ego na mpaghara ma ọ bụ na ịntanetị.
Enwere ọtụtụ akụkọ ihe ịga nke ọma n'ịntanetị. Ị nwere ike chọọ na Google. Na mbụ, ha bụ mmadụ nkịtị mana ha bụzi ndị ọchụnta ego naanị site na ịre ahịa mmekọ.
Nke gara agaỌ bụ ahịa Mgbakwunye Amazon kwesịrị ya?